को खेल मा रूले क्लब, तपाईं छ जो एक पाङ्ग्रा मा एक बल स्पिन गर्न आवश्यक 37 स्लट. बल को स्लट को कुनै एक मा पाङ्ग्रा को रोक पछि बन्द. तालिका खेलको प्रमुख उद्देश्य जो स्लट मा बल रोकिनेछ ठीक अनुमान छ. यो गरेर, एक payoff आफ्नो खम्बामा कमाएको छ. यो payoff आकार राखिएको खम्बा को प्रकार मा भिन्न. यो संसारको उत्कृष्ट प्रत्यक्ष बिक्रेता तालिका खेल मध्ये एक छ. प्रत्यक्ष खेल मेनु प्रमुख चयन पर्छ Roulette तालिका परिवर्तन वा केही फरक प्रत्यक्ष खेल चयन गर्न. प्रत्यक्ष बिक्रेता बटन तपाईं गेमप्ले समयमा धेरै अन्य खेल खेल्न अनुमति दिन्छ.
क्लब रूले को विकासकर्ता बारे
यो खेल NetEnt द्वारा संचालित छ. NetEnt सधैं देखि यसको खेलाडीहरूलाई परिस्कृत प्रयोगकर्ता इन्टरफेस प्रदान गरेको छ 1996. यसलाई विकास खेल साँच्चै विशेष हो र साथै सबै खेल पहुँच कहीं र कुनै पनि बेला हो किनभने कम्पनी को भारी सफलता हो - मोबाइल, खुद्रा वा डेस्कटप - जो तपाईं एक बहु-च्यानल उद्योग को उपस्थिति अनुभव गर्न अनुमति दिनुभएको छ.
तपाईंले पहिले नै राम्रो आधारित भूमि दुवै मा तालिका खेल र अनलाइन क्यासिनो उद्योग को लोकप्रियता संग परिचित हुनुपर्छ. जब तपाईं खेल्न रोज्न रूले क्लब, तपाईं एक देशमा आधारित क्यासिनो को एक वास्तविक जीवन अनुभव गर्नेछन्.
खेल तालिकामा उचित सट्टेबाजी क्षेत्रहरू छानेर दिइएको स्पिन मा उचित खम्बा चयन. यो 'कुल शर्त' विन्डो कुल शर्त देखाउँछ. तपाईं दोहोरिने बटन मा क्लिक गरेर अघिल्लो खेल मा राखिएको यस stakes दोहोरिन सक्छ. अघिल्लो राउन्ड गरेको शर्त लागि दोहोरिने बटन चयन भने, त्यसपछि शर्त दोब्बर हुनेछ. तपाईं Roulette तालिका मा बाजी को धेरै प्रकार गर्न सक्नुहुन्छ. शर्त को हरेक प्रकार स्लट संख्या एक अद्वितीय दायरा समेट्छ र विशिष्ट payoff खम्बा प्रत्येक प्रकार द्वारा प्राप्त छ. बोर्ड जो बाहिर स्तम्भहरू र पङ्क्तिहरू समावेश ती स्तम्भहरू छन् 12 पङ्क्तिहरू जबकि संख्यात्मक अब लाइनहरु छन्3संख्यात्मक छोटो लाइनहरु. यो तालिका खेल मा भित्र बाजी stakes को 1st पाँच प्रकारका छन्. तपाईं संख्यात्मक स्लट मा भित्र बाजी गर्न सक्नुहुन्छ. बाहिर बाजी अन्तिम छन्3बाजी को प्रकार र तपाईं अद्वितीय बक्से यी गर्न सक्नुहुन्छ तल प्रस्तुत.
रूले क्लब आदर्श प्रत्यक्ष बिक्रेता रूले NetEnt द्वारा विशेष खेल रूपमा मानिन्छ. सिद्ध उच्च गुणस्तरीय ग्राफिक्स र अचम्मको प्रयोगकर्ता इन्टरफेस दर्शक अपील.